दलालको फन्दामा परी भारत हुँदै कुबेत बेचिन पुगेकी अनु तामाङको आयो यस्तो खबर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दलालको फन्दामा परी भारत हुँदै कुबेत बेचिन पुगेकी अनु तामाङको आयो यस्तो खबर !
गरेको बताएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बन्धित निकायले पहल शुरु गरेका थिए । अहिले अनुलाई छोरी सलिनाको जिम्मा लगाइएको छ ।
साराले स्विकार गरिन् ‘केदारनाथको सुर्टिङका क्रममा सुशान्तसँग बसेकाे प्रेम!